စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကျိန်စာဆိုးကို မန်ယူအသင်း ချိုးဖြတ်နိုင်ပ့ါမလား
စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ မန်ယူ ရလဒ်ကောင်း ရယူနိုင်ပ့ါမလား
20 Oct 2018 . 3:57 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၉) စနေနေ့ပွဲတွေမှာတော့ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမယ့် ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ပါနေတယ်။ အဲဒါကတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်းတို့ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ စီးချင်းထိုးကြမယ့် ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလ်တို့ကတော့ ပွဲချောင်နေပြီး စပါးအသင်းဟာ လန်ဒန်ဒါဘီအဖြစ် ၀က်စ်ဟမ်းနဲ့ ကစားရမှာပါ . . .
ချယ်လ်ဆီး – မန်ယူ (စနေ ညနေ ၆း၀၀နာရီ)
ဒီရာသီမှာ တောက်လျှောက် တည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းပြသနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် ရုန်းကန်နေရတဲ့ မန်ယူတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပါပြီ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ (၈)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ရမှတ်(၂၀)ရရှိထားပြီး မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်တို့နဲ့ အမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့် ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတယ်။ မန်ယူအသင်းကတော့ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရဖို့ ရုန်းကန်နေရပြီး နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ အသည်းအသန်ကစားပြီးမှ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ခြေစွမ်းနဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက အသာရနေတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အသင်းကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကြောင့် မန်ယူကို လျှော့တွက်လို့တော့ မရဘူး။ တစ်ခုရှိတာက စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကွင်းမှာ မန်ယူအသင်း ရုန်းကန်ရလေ့ရှိတာကို သတိပြုရမယ်။ ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီမှာ နောက်ဆုံးအနိုင်ရခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်း ပြိုင်ပွဲစုံ(၈)ပွဲမှာ ချယ်လ်ဆီးက (၇)ပွဲနိုင်ခဲ့ပြီး (၁)ပွဲပဲ သရေကျခဲ့တယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်တွေကို မန်ယူခံစစ်က ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ မန်ယူတို့ သရေလောက်ပဲ မျှော်လင့်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး ဂိုးနည်းမယ့်ပွဲလို့ ထင်ပါတယ်။
မန်စီးတီး – ဘန်လေ (စနေ ည ၈း၃၀နာရီ)
ထိပ်ဆုံးနေရာကို ဦးဆောင်နေတဲ့ မန်စီးတီး အဲဒီအနေအထားကို လွယ်လွယ်နဲ့ လက်လွှတ်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ချယ်လ်ဆီးအသင်း ပွဲကျပ်နေချိန်မှာ အမှတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ဘန်လေအသင်းကတော့ (၂)ပွဲဆက် နိုင်ပြီးမှ နောက်ဆုံးပွဲမှာ ဟတ်ဒါဖီးလ်နဲ့ သရေကျခဲ့တယ်။ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုလည်း မရှိဘူး။ မန်စီးတီးအနိုင်သေချာပြီး ဂိုးပြတ်၊ မပြတ်ဘဲ ကြည့်ရမယ်
၀က်စ်ဟမ်း – စပါး (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
၀က်ဖို့ဒ်၊ လီဗာပူးလ်တို့ကို ဆက်တိုက်ရှုံးပြီးကတည်းက စပါးအသင်း ခြေစွမ်းတက်လာပြီး နောက်ဆုံး (၄)ပွဲဆက် အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ တိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း Harry Kane ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ စပါးအသင်း လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေရှိပေမယ့် ၀က်စ်ဟမ်းတို့ ရုန်းကန်နေရဆဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ကွင်းဆိုရင် ခြေစွမ်းမာကျောတယ်။ ၀က်စ်ဟမ်း သရေတစ်မှတ်တော့ မျှော်လင့်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ဟတ်ဒါဖီးလ် – လီဗာပူးလ် (စနေ ည၁၁း၀၀ နာရီ)
ဒီရာသီမှာ နိုင်ပွဲမရသေးတဲ့ ဟတ်ဒါဖီးလ်ဟာ လီဗာပူးလ်အတွက် ပြိုင်ဘက်ကောင်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လီဗာပူးလ်အနေနဲ့ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးတို့နဲ့ မျက်ခြည်မပြတ်စေဖို့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို အနိုင်ရဖို့ လိုပါတယ်။ ဟတ်ဒါဖီးလ်ရဲ့ အိမ်ကွင်းခြေစွမ်း မဆိုးတာကြောင့် လီဗာပူးလ် ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ အနိုင်ရလဒ်ကို ရယူသွားမှာပါ။
Chelsea? – ? Manchester United
AFC Bournemouth? – ? Southampton
Cardiff City? – ? Fulham
Manchester City? – ? Burnley
Newcastle United? – ? Brighton & Hove Albion
West Ham United? – ? Tottenham Hotspur
Wolverhampton Wanderers? – ? Watford
Huddersfield Town? – ? Liverpool
Photo:Press Cute News,GettyImages.,Evening Standard
စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ မနျယူ ရလဒျကောငျး ရယူနိုငျပ့ါမလား
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၉) စနနေပှေဲ့တှမှောတော့ ပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ပှဲကွီးပှဲကောငျးတဈပှဲ ပါနတေယျ။ အဲဒါကတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့ မနျယူအသငျးတို့ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ စီးခငျြးထိုးကွမယျ့ ပှဲဖွဈပါတယျ။ မနျစီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလျတို့ကတော့ ပှဲခြောငျနပွေီး စပါးအသငျးဟာ လနျဒနျဒါဘီအဖွဈ ဝကျဈဟမျးနဲ့ ကစားရမှာပါ . . .
ခယျြလျဆီး – မနျယူ (စနေ ညနေ ၆း၀၀နာရီ)
ဒီရာသီမှာ တောကျလြှောကျ တညျငွိမျတဲ့ခွစှေမျးပွသနတေဲ့ ခယျြလျဆီးနဲ့ ရလဒျဆိုးတှကွေောငျ့ ရုနျးကနျနရေတဲ့ မနျယူတို့ ထိပျတိုကျတှကွေ့ပါပွီ။ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ (၈)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ ရမှတျ(၂၀)ရရှိထားပွီး မနျစီးတီး၊ လီဗာပူးလျတို့နဲ့ အမှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့ ဒုတိယနရောမှာ ရပျတညျနတေယျ။ မနျယူအသငျးကတော့ နိုငျပှဲတဈပှဲရဖို့ ရုနျးကနျနရေပွီး နောကျဆုံးကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ အသညျးအသနျကစားပွီးမှ (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ခွစှေမျးနဲ့ တညျငွိမျမှုကို ယှဉျကွညျ့ရငျတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးက အသာရနတော အမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အသငျးကွီးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကွောငျ့ မနျယူကို လြှော့တှကျလို့တော့ မရဘူး။ တဈခုရှိတာက စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြကှငျးမှာ မနျယူအသငျး ရုနျးကနျရလရှေိ့တာကို သတိပွုရမယျ။ ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီမှာ နောကျဆုံးအနိုငျရခဲ့ပွီး အဲဒီနောကျပိုငျး ပွိုငျပှဲစုံ(၈)ပှဲမှာ ခယျြလျဆီးက (၇)ပှဲနိုငျခဲ့ပွီး (၁)ပှဲပဲ သရကေခြဲ့တယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ တောငျပံတိုကျစဈတှကေို မနျယူခံစဈက ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ခကျပါတယျ။ မနျယူတို့ သရလေောကျပဲ မြှျောလငျ့လို့ရမှာဖွဈပွီး ဂိုးနညျးမယျ့ပှဲလို့ ထငျပါတယျ။
မနျစီးတီး – ဘနျလေ (စနေ ည ၈း၃၀နာရီ)
ထိပျဆုံးနရောကို ဦးဆောငျနတေဲ့ မနျစီးတီး အဲဒီအနအေထားကို လှယျလှယျနဲ့ လကျလှတျခံမှာ မဟုတျဘူး။ ခယျြလျဆီးအသငျး ပှဲကပျြနခြေိနျမှာ အမှတျဖွတျဖို့ ကွိုးစားလိမျ့မယျ။ ဘနျလအေသငျးကတော့ (၂)ပှဲဆကျ နိုငျပွီးမှ နောကျဆုံးပှဲမှာ ဟတျဒါဖီးလျနဲ့ သရကေခြဲ့တယျ။ ခွစှေမျးတညျငွိမျမှုလညျး မရှိဘူး။ မနျစီးတီးအနိုငျသခြောပွီး ဂိုးပွတျ၊ မပွတျဘဲ ကွညျ့ရမယျ
ဝကျဈဟမျး – စပါး (စနေ ည ၈း၃၀ နာရီ)
ဝကျဖို့ဒျ၊ လီဗာပူးလျတို့ကို ဆကျတိုကျရှုံးပွီးကတညျးက စပါးအသငျး ခွစှေမျးတကျလာပွီး နောကျဆုံး (၄)ပှဲဆကျ အနိုငျယူခဲ့တယျ။ တိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျး Harry Kane ရဲ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့အတူ စပါးအသငျး လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျရောကျလာခဲ့ပွီ။ နာမညျကွီး ကစားသမားတှရှေိပမေယျ့ ဝကျဈဟမျးတို့ ရုနျးကနျနရေဆဲပဲ။ ဒါပမေဲ့ အိမျကှငျးဆိုရငျ ခွစှေမျးမာကြောတယျ။ ဝကျဈဟမျး သရတေဈမှတျတော့ မြှျောလငျ့ခှငျ့ရှိတယျလို့ ထငျမိတယျ။
ဟတျဒါဖီးလျ – လီဗာပူးလျ (စနေ ည၁၁း၀၀ နာရီ)
ဒီရာသီမှာ နိုငျပှဲမရသေးတဲ့ ဟတျဒါဖီးလျဟာ လီဗာပူးလျအတှကျ ပွိုငျဘကျကောငျး ဖွဈလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ လီဗာပူးလျအနနေဲ့ မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီးတို့နဲ့ မကျြခွညျမပွတျစဖေို့ ဒီလိုပှဲမြိုးကို အနိုငျရဖို့ လိုပါတယျ။ ဟတျဒါဖီးလျရဲ့ အိမျကှငျးခွစှေမျး မဆိုးတာကွောငျ့ လီဗာပူးလျ ခကျခဲနိုငျပမေယျ့ လိုအပျတဲ့ အနိုငျရလဒျကို ရယူသှားမှာပါ။